Apple manakana ny fampisehoana iCloud Private Relay an'ny iOS 15 any Russia | Vaovao IPhone
Apple manakana ny fampisehoana iCloud Private iCloud an'ny iOS 15 any Russia
Angel Gonzalez | 17/09/2021 20:00 | iOS 15, About us
iOS 15 sy iPadOS 15 dia mitondra ny iray amin'ireo endrika manintona indrindra an'i Apple: iCloud Private Relay na iCloud Private Relay. Fitaovana iray izay mamela ny mpampiasa manafina ny IP-ny amin'ny fotoana rehetra manakana ny serivisy tsy hahazo mombamomba ny toerana. Apple dia nanambara tao amin'ny beta 7 an'ny iOS sy iPadOS 15 fa handao ny asany izy io amin'ny endrika beta ampahibemaso ary havoaka amin'ny fomba ofisialy fa kilemaina amin'ny alàlan'ny default. Volana vitsivitsy lasa izay dia nanambara ny firenena sasany i Apple fa tsy hahita an'io asa io izy ireo noho ny olana amin'ny lalàna mifehy azy ireo. Fantatsika izao Nosakanana ny fidirana erak'i Rosia amin'ilay fampiasa ary azo inoana fa ho ampiana ao amin'ny lisitry ny firenena izay tsy misy ilay fisehoana.
iCloud Private Relay dia nanjary endrika beta tao amin'ny beta farany an'ny iOS 15
iCloud Private Relay dia tsy hahita ny jiro any Russia
iCloud Private Relay dia serivisy ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra rehetra ary mizaha Internet amin'ny Safari amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka kokoa. Izy io dia miantoka fa ny fifamoivoizana mivoaka avy amin'ny fitaovanao dia voahidy ary mampiasa fampitana Internet tsy miankina roa mba tsy hisy afaka mampiasa ny adiresy IP anao, ny toerana misy anao ary ny hetsika fitetezana anao mba hamoronana mombamomba anao amin'ny antsipiriany.
Tamin'ny volana Jona, Tim Cook nanome toky fa ny iCloud Private Relay tsy ho tonga any Belarus, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Saudi Arabia, Africa South, Turkmenistan, Oganda ary Philippines. Nandritra ny resadresaka nifanaovana taminy dia nanome toky izy fa tsy misy sakana hafa ankoatry ny antony mifehy ny firenena tsirairay. Noho izany, ny kinova farany an'ny iOS 15 sy iPadOS 15 dia tsy hampiditra ity asa ity ary raha sendra miditra ny firenena dia tsy ho azo ampiasaina.
Ny iCloud Private Relay dia tsy tohanana intsony ao Russia pic.twitter.com/df4z1q0gLQ
- Аб @ @ (@abdulla_hasan) Septambra 16, 2021
Ora vitsy lasa izay dia nanomboka nipoitra ireo bitsika ary vaovao mpampiasa miaraka amin'ny iOS sy iPadOS 15 betas tsy afaka nijerijery tamin'ny iCloud Private Relay any Russia izy ireo. Raha ny marina dia nisy hafatra iray nilaza fa: 'iCloud Private Relay dia tsy misy amin'ity faritra ity'. Noho izany, Apple dia mety nanakana ilay fampisehoana tany Russia. Noho izany dia ampiana amin'ireo firenena izay tsy misy ilay fitaovana izy ireo amin'ny alàlan'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ireo rafitra miasa. Azo zahana ihany koa amin'ny macOS Monterey, mety.
ICloud Private Relay dia mampiasa mpizara roa samy hafa afeno ny IP sy ny toerana misy ny mpampiasa. Ao amin'ny mpizara voalohany dia esorina ny IP am-boalohany ary amin'ny faharoa kosa ny famantarana dia averina amin'ny serivera. Ny IP izay alefa dia adiresy diso izay mametraka geo-toerana ny IP tany am-boalohany mba handraisana atiny manokana. Na dia miafina aza ny adiresy IP an'ny mpampiasa ary manakana ny mpizara tsy hamorona mombamomba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Apple manakana ny fampisehoana iCloud Private iCloud an'ny iOS 15 any Russia